FAMPAHALALANA MOMBA NY KARAZANY SY SARY KELY AN'NY FOX TERRIER DOGATURE - ALIKA
Fampahalalana momba ny karazany sy sary kely an'ny Fox Terrier Dogature
Judell Lucky, novokarin'i J. Jones, Judell Kennels. Tompon'ny R&C Crawford, Fleetwood Kennels. Sary nahazoana alàlana.
Lisitry ny Miniature Fox Terrier Mix Dogs
Ny Miniature Fox Terrier dia tererika malemy, mailaka ary be tarehy izay mitazona ny fikafika fihazana sy ny fahamafisan'ireo zanak'olo-mpiray tam-po aminy. Ny karazany dia mitovy amin'ny Toy Fox Terrier ary fantatra amin'ny fomba mahazatra hoe 'Mini Foxie' any Aostraliana tanindrazany. Ny lohan'ny Miniature Fox Terrier dia miavaka, misy sofina mijoro izay mety hijoro mahitsy na mivalona eo amin'ny tendrony ihany. Ny mampiavaka azy koa dia ny tongony miendrika artikaly sy boribory lavalava. Ny fenitry ny fiompiana dia namela ny rambon'ny alika hametahana na hamoha. Fantatra fa misy ny bobtail voajanahary. Tsy misy afa-tsy fampifangaroana loko telo avela: mainty sy fotsy, mainty sy fotsy ary trisolor (mainty, fotsy sy volontany).
Tsy mivadika, tia karokaroka, tsy matahotra, mavitrika ary azo ovaina, Miniature Fox Terriers dia manana toetra roa: amin'ny famantarana voalohany ny ahiahy, ny loza na ny fanairana, ny lapdog manjavozavo dia manjary mpiambina tsy misy tahotra, mpamono olona vermin ary mpihaza tsy mataho-tody. Izy ireo dia tsara amin'ny ankizy izay ampy taona hanavahana ny alika sy ny kilalao plush, ary amin'ny ankapobeny dia mifankahazo amin'ny biby hafa. Na izany aza, toy ny terriers rehetra, ny Mini Fox Terrier dia tsy afaka manavaka ny biby mpikiky biby na ny biby mandady sy ny biby mandady, ary tsy tokony havela irery miaraka amin'ny biby toy izany. Aza avela hivoatra izy ireo Syndrome kely alika . Aza mitondra azy ireo toy ny olombelona kely . Tadidio fa biby kaninina izy ireo. Omeo azy ireo izay azony mila ho azy io biby io . Raha tsy izany no ataonao ampiaraha-miasa ity alika ity ary mihaona amin'ny azy rehetra instincts canine , mety hiteraka tsy fahatokisana zavatra vaovao na hafa izy, izay mety hiteraka fikororohana fanairana tafahoatra. Zava-dehibe ny itondranao ny alikanao mandeha isan'andro ny fonosana .
Hahavony: 9 - 12 santimetatra (26 - 31 cm)
Ny lanjany dia tokony hitovy amin'ny halavan'ny alika.
Amin'ny ankapobeny vitsy. Mini Fox Terriers dia manana lalàm-panorenana matanjaka ary lava velona. Ireo mpiompy izay mpikambana ao amin'ny Mini Foxie Club any Aostralia dia mitazona tahiry fiompiana manohitra ireo olana ara-pirazanana mahazatra amin'ny karazana alika kely.
Ireo alika ireo dia azo ovaina ary afaka mizatra amin'ny fiainana an-tanàna na any ambanivohitra. Ny haben'ny habeny dia midika hoe afaka manamboatra toerana malalaka kokoa izy ireo. Mijanona malaza izy ireo amin'ny maha-alika fianakaviana azo antoka azy ireo, ary ny fikojakojana ambany sy ny fahafahany mampiala-tena raha omena kilalao no mahatonga azy ireo safidy tsara ho an'ny mpitovo sy ny zokiolona koa.
Ny Mini Foxies dia manao tsara indrindra amin'ny fanatanjahan-tena antonony farafaharatsiny. Mila entina amin'ny a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ho fanampin'izay, hankafizin'izy ireo ny milalao kilalao sy lalao ‘mahay’ ao an-tokontany. Hiaraka am-pifaliana amin'ny tompony amin'ny dia an-tongotra sy fitsangantsanganana mafimafy kokoa izy ireo, eny fa na dia ao anaty soavaly aza mandritra ny fotoana fohy!
10 ka hatramin'ny 14 taona eo ho eo
Ankizy 2 ka hatramin'ny 3 eo ho eo
Minimal. Mini Fox Terriers manana palitao fohy. Aseho amin'ny toe-javatra voajanahary foana izy ireo. Tsy maintsy manana tapa-tongotra matetika ny toenail.
Mini Foxies, araka ny ahafantarana azy ireo, dia nompiana tany Aostralia (amin'ny anarana maro samihafa) hatramin'ny taona 1800. Ireo terenera kely mpiorina ireo dia taranaky ny karazana fox terrier nobeazina tany Angletera ary nentin'ny mpifindra monina tany Aostralia. Ny karazany dia nitombo tamin'ny tsipika mitovy amin'ny American Toy Fox Terrier. Raha ny azo hamaritana azy dia niampita niaraka tamin'ny Smooth Fox Terriers kely Manchester (Gentlemen's) Terriers. Ny alikakely kely kokoa avy amin'ireny tazo ireny dia nompiana bebe kokoa ary avy eo dia niampita tamina karazana kely hafa toy ny English Toy Terrier , Whippet SY Greyhound italianina . Ireo mpiompy dia mitady alika maivana sy haingam-pandeha hitazona ny toetran'ny Fox Terrier, raha mihaza bibikely kely kokoa toy ny bitro sy ny biby mpikiky. Ny Miniature Fox Terrier dia karazany aostralianina izay nanjary nitombo hatramin'ny ela. Miavaka ny fijeriny.
MFCA = Mini Foxie Club any Australia Inc.
Cindy avy amin'ny Davmac dia nitetika ny Miniature Fox Terrier, an'i J. MacGinniskin, sary nahazoana alalana
Mini Fox Terrier antsoina hoe Squirticus, an'ny M&A Curry, Mini Fox Terrier, sary nahazoana alalana
Pasqua an'ny Ceruti Lodge miaraka amin'ny fako alika kely , fananana sy nobeazin'i A. Field, sary nahazoana alàlana
Mpihanika hazo: Maranoa Diane Tan sy fotsy Miniature Fox Terrier, naterak'i F & W Mitcherson, namboarin'i A&C Hoffmann, sary nahazoana alalana
Fleetwood Amy Belle, Miniature Fox Terrier misy karazany telo, naterak'i R&C. Crawford, tompon'i J Merchant, sary nahazoana alalana
Zoe BIS headshot, Jocara Rhiannan dia nitifitra Miniature Fox Terrier, tsara indrindra amin'ny Show - Castle Hill, New South Wales, Novambra 2006, novokarin'i J Merchant, tompon'ny M&A Curry, sary nahazoana alalana
fifangaroana husky siberian volamena retriever
Zoe pup, Jocara Rhiannan dia nanamboatra ny Miniature Fox Terrier ho toy ny alika kely, notezain'i J Merchant, tompon'ny M&A Curry, sary nahazoana alalana
Missy ilay alika kely Mini Fox Terrier amin'ny 4 volana
'Me ... me me me me me me ....' Lucy, Miniature Fox Terrier — Tompon'ny Lucy nilaza hoe: 'Alika mahafinaritra tokoa izany. Ankafiziko bebe kokoa isan'andro izy. :) '
'Ny alikako dia antsoina hoe Buddy ary alika kely fotsiny izy amin'ity sary ity. Mini Foxie madio izy ary alika kely mavitrika. Tiany ny milalao alika hafa ary matory ao ambanin'ny fonony eo am-pandriany. Tsy tiany ny milomano sy mitondra fiara ao anaty fiara mandritra ny dia lavitra, satria marary ny fiara. Manana fahazaran-dratsy ny mitsambikina amin'ny olona sy amin'ny latabatra ivelany izy. Ny fahazarany tsara dia alika mpiambina tsara izy ary tsy miady amin'ny alika hafa mihitsy. '
anatolianina mpiandry alemanina mpiandry ondry mifangaro alika kely
fifangaroan-dra bloodhound amidy
afangaro chihuahua amin'ny alika wiener
jack russell shih tzu mifangaro alika kely alika kely
ohatrinona ny alika an-tendrombohitra Kaokazy
gascon bluetick coonhound amidy